ओलीको अध्यादेशले सत्तारुढ नेकपाभित्र हंगामा, पूर्व माओवादीको कडा आपत्ति, प्रचण्डले के भने ? — Sanchar Kendra
ओलीको अध्यादेशले सत्तारुढ नेकपाभित्र हंगामा, पूर्व माओवादीको कडा आपत्ति, प्रचण्डले के भने ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको पूर्व माओवादी खेमाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।
सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको भन्दै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक हर्कत भयो। पार्टीमा समेत छलफल भएन। यो लोकतन्त्रको उपहास हो। यो अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने,’ पार्टीहरूले पनि संसद अधिवशेन बोलाउन माग गरिहरहेको र संसद अधिवशेन नजिकै आइरहेको बेलामा जुन ढंगले अध्यादेश आएको छ।यो बदनियतपूर्ण छ। यसलाई तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ।’
केछ अध्यादेशमा ?
कार्यविधिको उपदफा (५) मा परिषद्ले कुनैपनि निर्णय गर्दा सर्वसम्मति कायम हुन नसके सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने स्पस्ट उल्लेख छ । साथै ‘उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछन् र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । अध्यादेश ल्याएर यसबारे निर्णय गरिए नेकपाभित्र विवाद थप चर्किन निश्चित छ ।